अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु
नेपाल लाइभ | २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार | Tuesday, May 14, 2019 १५:५२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- दूई दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय कार्यदलले सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तन र विकासको मोडेलका कारण मानव जातिले धेरै समस्या भोगेकोले ती समस्या समाधान गर्न सम्मेलन फलदायी हुने बताए।
सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले कृषि क्षेत्रमा अहिले अंगीकार भइरहेको विकास मोडल नै अनपयुक्त रहेको धारणा राखेका थिए। ‘पूँजीवादी विकासका कारण पृथ्वी दोहन गरेर भए पनि आफूलाइ नाफा हेर्ने विकासको गति उचित होइन। यसरी विकासलाइ सही दिशा दिन सकिन्न। विकासको मोडेल र त्यसलाई सन्चालन गर्ने विधि सही भएन भने विकास सही दिशामा जाँदैन। आधुनिक खेती गर्ने भने पनि हामी किन दिनप्रतिदिन आयातमूखी भएका छौं। यसको समिक्षा गर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने।
कृषिप्रधान मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए। ‘अर्बौको कागती मात्र आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना कस्ले गर्यो? कुन राजनीतिक प्रणालीले गर्यो? समीक्षा गर्ने उपयुक्त बेला आएको छु,' पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सम्मेलनमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्राङ्गारिक खेतीबाट व्यवसायिक कृषि गर्न सकिन्न भन्ने धारणा गलत रहेको बताए। ‘प्राङारिक खेती गर्न सकिन्न भनेर थाकेका साथीहरु पनि भेटेको छु। तर नथाक्नुस सकिन्छ। तपाईहरुले गर्छु भनेर मात्र पुग्दैन, आँट्नु पर्छ,’ मन्त्री खनालले भने।
ठूलो परिमाणमा रसायनिक मल विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग भइरहेकोमा त्यसलाई स्वदेशी प्राङ्गारिक मलले नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने खनालको भनाइ छ। ‘अहिले वर्षे बालीका लागि मात्रै ३/४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेछ। त्यसको ठाउँमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकभित्र प्राङ्गारिक कृषिका विषयमा यसरी छलफल पहिलो पटक भएको बताउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय बहसको बिषय बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।